Soo-saareyaasha Xaashida Cagaarka Muraayadda & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda Xaashida Cagaarka Madoow ee Shiinaha
Xaashida muraayadda Polystyrene (PS) ayaa beddel wax ku ool ah u ah muraayad dhaqameedka oo ku dhowaad aan la jabin karin oo khafiif ah. Ku habboon farsamooyinka, sameynta moodeelka, naqshada gudaha, qalabka guryaha iyo wixii la mid ah.
• Waxaa lagu heli karaa go'yaal 48 ″ x 72 ″ (1220 * 1830 mm); cabirrada caadada la heli karo
• Waxaa laga heli karaa .039 ″ ilaa .118 ″ (1.0 mm - 3.0 mm) dhumucda
• Waxaa lagu heli karaa midab qalin cad ah
• Waxaa lagu siiyay polyfilm ama mashiinka waraaqaha, dhabarka dhejiska iyo shaashadda caadada ah
Xaashida 'PETG Mirror sheet' waxay bixisaa been abuur isku dhafan oo leh saameyn saameyn wanaagsan, dabacsanaan qaabeyn wanaagsan iyo xawaareynta been abuurka. Waxay ku habboon tahay Alaabta Carruurta, waxyaabaha la isku qurxiyo, iyo agabyada xafiiska.
• Waxaa lagu heli karaa xaashiyaha 36 ″ x 72 ″ (915 * 1830 mm); cabirrada caadada la heli karo
• Waxaa laga heli karaa .0098 ″ ilaa .039 thick (0.25mm -1.0 mm) dhumucda
• Waxaa lagu siiyay shaashadda polyfilm, ranji, warqad, xabag ama dhabarka dambe ee caagga PP
Xaashiyaha Muraayadaha Polycarbonate waa muraayadaha ugu adag ee laga heli karo suuqa. Awooddooda cajiibka ah iyo iska caabbinta ay kala kulmeen awgood, waa wax aan la jebin karin. Qaar ka mid ah waxtarka muraayadayada PC-ga ayaa ah saameyn saameyn sare leh, adkeysi, iska caabin kuleyl badan, muuqaal cad iyo xasilooni cabbir leh.
• Waxaa laga heli karaa .0098 ″ ilaa .236 ″ (0.25 mm - 6.0 mm) dhumucda
• Warqadda eeg-Thru ee la heli karo
• Dahaarka u adkaysiga xoqida ee 'AR' oo la heli karo
• Dahaarka ka hortagga ceeryaanta oo la heli karo